Skype pane iyo iPad | Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 15, 2011 Muvhuro, Nyamavhuvhu 15, 2011 Douglas Karr
Ndichiri kurangarira apo mahwendefa aifungidzirwa sechidiki kunze kwechinyakare. Nekudaro, kune akawanda mashandisirwo ari kushandura iwo mushandisi maficha uye ari nyore pahwendefa hunhu is change. Nhasi chaiye ndasiya laptop yangu kumba ini ndichienda kuna Barnes naNoble. Ndakauya neIpad yangu ipapa ndikapedza basa chairo.
Kunyangwe hazvo ini ndiine Kutinhira nechiratidziro chakakura, yangu iPad ichine zvakawanda zviri nyore zvivakwa zvekushandira. Handisi ndega… Digitimes inoshuma kuti mahwendefa emamirioni makumi mana ePadesi achatengeswa muna 40 uye nhamba iyoyo inotarisirwa kukwira zvakapetwa kaviri. manhamba gore rinotevera. Yechitatu mapato mapiritsi anotarisirwa kuti aone katatu-manhamba ekukura! Kutengesa Laptop, kune rumwe rutivi, vane akadzika. Hwendefa rasvika!
Heano kushambadzira kwe Skype ichangoburitswa yeiyo iPhone:
Iye zvino Skype iri paIpad. Mubvunzo unofanirwa kubvunzwa, izvi zvichaitei kumusika wenharembozha? Kutengesa kwenharembozha kuri kuramba kuchikwira - ichipfuura kutengesa kwePC… ichaenderera kwenguva refu? Mukuvimbika kwese, kana ndikakwanisa kuita mafoni emhando yepamusoro kuburikidza neSkype paPadad yangu pane pasingabatanidzwe huru isina waya (kunze kwekunge vape waya vasina kuivharira)… ndodazve foni yangu? Iwe unogona here kumboona kutengesa mune yako mbozhanhare zvachose?
Tags: musangano wekugadzwaYepamhepo magariro midhiya manejimendiGoogle AdWords yeSEOGoogle Analytics yeSEOInternet Movie ArchivesJiraokutengesa maneja
Aug 15, 2011 na11: 00 PM
Iyo mbozhanhare chirongwa chinoshanduka chikave mbozhanhare data data. Munguva pfupi inokwana rese traffic traffic ichafamba pamatafura e data. Mubvunzo chete uchave fomu chinhu chaunoshandisa mukutaurirana. Ini ndoda kutora laptop yangu, piritsi kana homwe yangu pc?